Ciraaqna La xuree, Somaliland-na is xureeysay!
C/raxman Ceynte | Minnesota | Ceyntejournalist@attbi.com
Caalamku wuxuu maryaa meelihii uu ugu qaska badnaa. Reer Ciraaq wexeey dhex joogaan "Xoriyad" la muquuniyey. Soomaalida inteeda badanna wexeey ku dhex noolyihiin "Xoriyad" macnayaal fara badan leh.
Somaliland oo ah gobol gooni isu taagay ayaa galay baal cusub oo siyaasadeed iyo bulshadeedba. Somaliland waxaa ka dhacday doorasho aanan ka dhicin inta badan dalalka Africa iyo kuwa muslimka ahba. Sida eey sheegeyso hey'adda horumarinta ee Qaramada Midoobay-, UNDP, 9 waddan oo islaam ah ayaa sheegta dimoqoraadiyad, halka 3 waddan oo kaliya eey si rasmi ah ugu dhaqmaan. Dabcan Somaliland cidna ma xisaabsaneyso, ha yeeshee wexeey ila tahay in la soo gaaray waqtigii la xisaabsan lahaa!
Soomaali fara badan ayaa qoraallo fara badan ka askumay arrinta Somaliland. Waxaa kawada muuqatay inta badan ineey ama hinaaseysan yihiin, ama xaasid yihiin. Walaalkeey Amiin Caamir ayaa kamid ah. Wexeey ila tahay inaan si xushmad leh u qilaafo saaxibkeey, sawir gacmeedka caanka ah ee uu ka sameeyey doorashaas. Kaas oo qeexaya in woxoogaa laaluush ahi meesha soo galay. Anigu xitaa Ayeeyadeey kama soo jeedo somaliland. Ha yeeshee soomaali runta alle ku ogyahay baan isku arkaa. Somaliland lama xureynine, weey is xureysay! Dadka reer Soomaaliland Matoorka saarani waa mid lamid ah midka saaran dadka waddamada horey u maray. Sida Plato & Artistortle - Siyaasiyiin qadiim ah oo reer Giriig ahaa- eey isku raacsan yihiinba, Dimoqoraadiyadu wexeey timaadaa marka laba arrimood laga helo bulshada dimoqraadiyad doonka ah. (A) Aqoonyahanno mug leh (B) Xeyn kamid ah bulshada oo dhaqaale ahaan iska ladan. Sababta eey sidaas u yiraahdeen macnayaal fara badan ayaa loo sameeyey. Horta qofku marka uu cilmi leeyahay wuxuu dareemayaa, isla markaana dhadhansanayaa nafciga nolosha. Midda labaad, Qofku marka uu lacag leeyahay wuxuu aad u necbaanayaa in xasilooni darro iyo maamul xumo dhacdo. Taas ayaa ku khasbeysa inuu taageero "maamul dimoqraadi ah" ayeey yiraahdeen.
Haddaba, Somaliland wexeey ku guuleysatay ama hanatay ugu yaraan dhanka aqoonta. Somaliland waxeey leedahay mutacalimiinta ugu sareeysa soomaaliya oo dhan. waxaa ka socda mashaariic kala duwan oo waxtar weyn u leh bulshada. Dhanka dhaqaalahana, ma hubo ineey dhaqaalo weyni meesha yaal. Ha yeeshee hubaal waxaa ah ineey gacanta ku hayaan ganacsiyo caalami ah oo eeysan soomaalida kale heysan. Somaliland ugu yaraan wexeey ka xoroowday maskaxda. Sidoo kale, wexeey la jaanqaaday dowladaha horumaray ee dayaxa korkooda dilaaliinta ku leh, oo boosas 20/20 ku kala iibinaya dhulka korkiisa! Somaliland wexeey caalamka u cadeeysay ineey noqon karto jiritaan ka maarma gurigoodii hooyo ee soomaaliyeed. Anigase wexeey ila tahay inaan u baahannay Somaliland, ka badan inta aan u baahanahay dadkale, noocay doonaan ha noqdeene. Hadii eey taladeyda tahayna, Waxaan soomaaliya u dhiibi lahaa "Hogaamiye shibil ah " oo reer Somaliland ah. Sida Ciraaqba mid mareykan ah oo shibil ah loogu dhiibay! Waxaan amri lahaa in mutacalimiinta soomaaliland iyo siyaasiyiintoodaba u furaan soomaalida kale koorso degdeg ah oo lagu barto "Maamulka iyo Maareynta". Intaas waxaa sii dheer, Waxaan reer soomaaliland u dhiibi lahaa duruus lagu barto sida shacbigu ugu hoosnoolaado Madaxweyne ka soo jeeda qabiil laga tiro badan yahay. Lagabana yaabee in aan u sameyn lahaa "Waaxda u carbinta isu dulqaadashada qabiilada"!
Ugu danbeystii, Soomaalida inteeda kale waxaa la gudboon ineey dib u laqaan, isla markaana u bogaadiyaan walaalohood Somaliland ee 80-ka cod ku kala baxay! Yaanan waxba la xasdin dadkaase, in lagu dayado ha la'isku taxallujiyo.